AMD inotenga Xilinx yemadhora zviuru makumi matatu nezvishanu zvemadhora: mhedzisiro | Linux Vakapindwa muropa
AMD inotenga Xilinx ye $ 35.000 bhiriyoni: mhedzisiro
Pasina nguva refu NVIDIA yakaita rimwe danho rekutenga nekutenga Ruoko, nemhedzisiro yemhedzisiro. Yakanaka iyo Graphzilla pachayo, uye isina kunaka kune avo parizvino vanovimba neARM ecosystem tekinoroji. Zvave ikozvino AMD iyo yaita imwe nzira yekufamba nekutenga Xilinx.
Uye ndeyekuti AMD iri pakanaka kwazvo, ndosaka yatora mukana weiyo kusabhadhara chimwe chinhu uye hapana chakaderera pane 35.000 mamirioni emadhora kutora Xilinx uye yayo yese portfolio yezvigadzirwa uye tekinoroji, kunyanya iyo inoenderana ne5G uye FPGAs.
1 Migumisiro yakanaka
2 Migumisiro yakaipa?
Mune ino kesi hapana yakakosha mhedzisiro senge iri mune yekutenga kweArm neNVIDA. Ichokwadi icho Zvigadzirwa zveXilinx Ivo vane kuwanda kwevatengi nemakambani anoenderanawo nazvo, asi mune iyi kesi pane dzimwe nzira uye, uyezve, haina hunyanzvi hwakakura senge mune nyaya yeARM.
Sezviri pachena, AMD ndiyo ichave iyo inobatsira zvikuru yekutenga uku, kunyangwe inogona kusanganisira njodzi nekuda kweiyo hombe mari yawakaburitsa. Dzimwe nyanzvi dzinofungidzira kuti kwaigona kunge kuri kupera kwekambani iyi, senge yaimbova Intel François Piednoël. Uye ndezvekuti, kunyangwe paine yakanaka nguva ye AMD, iri mari yakawandisa kune homwe yekambani.
Wese munhu anozoyeuka zvakaitika AMD yakatenga ATI. Icho chaive chiito chakakosha, asi zvaive zvakare ichokwadi kuti kwaive kurova kwakanyanya kusimba re AMD, uye zvakatora nguva yakareba kuti uwanezve kubva kwairi. Ichokwadi kuti panguva iyoyo yanga isiri iyo AMD nhasi, asi isu tichafanira kungwarira ...
Sezvauri kuona, kune zvakawanda uye zvakawanda kubatanidzwa kwekambani. Iwo mahombe acho anoda simba rakawanda uye rakawanda kuti akwanise kukwikwidza mune mimwe misika yakakosha, uye inopindura pakutenga uku kuri kuitika, senge iyo yeNVIDIA neArm, kana iyo yapfuura kubva kuMellanox, uyezve iyi ye AMD- Xilinx.
Intel, Pane kudaro, ivo havasi kungotenga, asi ivo vari kutengesa yavo yekumusoro ndangariro kupatsanura kuna SK Hynix yemadhora mapfumbamwe emadhora. Uye kwete chaizvo nekuti vanoda mari, nekuti maakaundi avo ane hutano, asi nekuti ivo havaikwikwidze muchikamu icho uye vari kubvisa yavo NAND flash bhizinesi (yavo Intel Optane ndangariro dzinoenda mumaChinese maoko).
Intel saka inosara iine richine simba bhizinesi maererano nemaCPU, uye nekubheja maGPU neIntel Xe yayo iyo ichiri yakasvibira uye isingakwanise kukwikwidza ne AMD neNVIDIA izvozvi. Mamiriro ezvinhu aChipzilla haana kunyatsonaka, isu tichafanirwa kumirira kuti tione kana mafambiro akaitwa mukati maro kuti achinje mamiriro acho ezvinhu.
Asi kana vasingakwanise kuita, NVIDIA kutyisidzira kukuru izvozvi sezvo iine zvese kuti zvibudirire muchikamu cheGPU kuve iye mutungamiriri wazvino, uyezve izvozvi maturusi ekuzviita munharaunda yenetwork (neMellanox) nemaCUU (ane Arm), anoiisa semumiriri kutonga chikamu cheHPC.
AMD yechikamu chayo ikozvino ichakwanisa kuverenga Xilinx's 5G nhare tekinoroji ku, pamwe zvakare kurwisa iyo chikamu chekufamba (Rangarira kuti vakatadza kutengesa yavo yemagetsi giraidhi kuQualcomm, iyo yava rave rine simba Adreno mifananidzo ...), semuenzaniso, vachipesana neNVIDIA SmartNICs uye vachipesana neIntel's 5G.
Iyo zvakare inowana mune yayo chigadzirwa portfolio iyo ane simba Xilinx FPGAs, iyo yekuisanganisira chaiyo mahedheni ekuwedzera mamwe mabasa, iyo Adaptative SoC pamwe neayo EPYC, iyo inogona zvakare kuve mukana muHPC. Rangarira kuti Intel yakawanawo Altera's FPGA bhizinesi mu2015, saka ichakwanisa kukwikwidzana nayo, nemusiyano wekuti Altera aive FPGA huru, asi Xilinx mutungamiriri mune izvi ... Kuzvipira kwe AMD kwave kwakasimba.
Heterogeneous computing inguva yemberi, uchishandisa mamwe mapurosesa kuita mabasa nekukurumidza uye nemazvo sezvinobvira. Izvo hazvina musoro zvakanyanya kushandisa zvakajairika-chinangwa maCPU ezvese zvinhu. GPGPUs dzakatoratidzira izvi, asi zvakare mamwe akasarudzika ekuwedzera, senge AI aya. Ndihwo huripo neramangwana renzvimbo yedata ...
Uye zvechokwadi, iwe une hutano hwakanaka maererano neako GPUs. Kunyangwe ivo vasiri pamazita echisimba eNVIDIA, asi vanogona kuzviitira kukuvadza kukuru, uye panguva ino ivo vari kumberi kweIntel.
Chokwadi ndechekuti zvakadaro hapana zvakawanda zvakazivikanwa zvinozivikanwa yechibvumirano che AMD neXilinx, asi pakatarisana nekubviswa kwemari kwakadai, zvingangoita kuti vacharamba vachienderera mberi neXilinx yose yechigadzirwa chepamberi kuti vawane purofiti kubva kudivi iro. Intel yakazviita pamwe neAltera zvigadzirwa, izvo zvino zvaenderera mberi. Saka zvese zvaizoratidza kuti AMD ichaendererawo, uye haizoregi chero chigadzirwa chine Xilinx izvozvi.
Izvo zvaizoita kuvashandisa ivo kubatsira, asi izvo hazvifanirwe kunetseka zvakanyanya kune ese aripo Xilinx vatengi. Uyezve, marezinesi aisazoshanduka sekutyiwa kwenyaya yeArm.
Altera aive wechipiri mukakavara uye iri yeIntel. Mutungamiri Xilinx ave kubva kuADD. Kune makambani mashoma akasara mubhizimusi reFPGA akakura. Mimwe mienzaniso ndeyeLattice Semiconductor, Microsemi, uye QuickLogic.
Iyo yaigona kuva nazvo zvakanyanya kuomarara ndeye NVIDIA, Anokwikwidza akananga weADD. Sezvo yavo Mellanox networking zvigadzirwa vanoshandisa Xilinx FPGAs ekugadzirwa kweakanyanya kumhanya ekubatana. Zvino iwe ucharamba uchichengeta chibvumirano ichi neNVIDIA uchiziva kuti ivo vanokwikwidza? AMD inogona kunge isingave nechido chekupa tekinoroji kumukwikwidzi wayo, saka NVIDIA yaizove nedambudziko rakakomba.
Dzimwe nyanzvi dzinoti hazvingaite zvine musoro kubvisa tekinoroji iyi, kubvira NVIDIA inogona kubatsira AMD zvakare mupfungwa yekuti mutengi mukuru anokuunzira purofiti. Izvo zvavanogona kuita kushandisa Xilinx kune kwavo mukana kune yavo izere-inomhanya Ethernet network sitaki, uye kukwanisa kuvhura chigadzirwa chinokwikwidza cheNVIDIA tekinoroji.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » AMD inotenga Xilinx ye $ 35.000 bhiriyoni: mhedzisiro
Nezve mvuu ine mvere. Izvi isu tinoziva kubva Ubuntu 21.04
Nei ndave kuda kusiya Kubuntu ndichienda kuManjaro, uye sei ndasarudza kusa [Nyaya yemunhu]